Raha miala amin'ny haino aman-jery sosialy ianao, dia ho hitanao ireo tombontsoa lehibe 6 ireo - Blog
Raha miala amin'ny haino aman-jery sosialy ianao, dia ho hitanao ireo tombontsoa lehibe 6 ireo
Ny media sosialy dia mety ho mavesatra tokoa indraindray - ary tsy misy afa-bela amin'ny vokany ratsy.
Toa ny toerana hitodihantsika rehetra dia tototry ny ratram-po, ratram-po, ary ny fahatsapana ankapobeny fa ho any amin'ny afobe izao tontolo izao.
Ireo olona izay mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny tranokala toa Facebook, Instagram, ary Twitter dia matetika no mitatitra fitaintainanana sy fahaketrahana.
inona no hilalao ao an-trano rehefa mankaleo anao
Ary, tena, azonao atao ve ny manome tsiny azy ireo?
Rehefa manodina ny fahana nataonao dia tsy isalasalana fa hahita sary na horonan-tsary tsy azonao jerena ianao, lahatsoratra izay mampihetsi-po ary dokam-barotra izay mahatonga anao hahatsapa ho tsy ampy.
Ireto ny sasany amin'ireo tombontsoa lehibe azo avy amin'ny fialan-tsasatra amin'ny media sosialy, na ny fialana tanteraka mihitsy aza.
1. Tsy ho afaka hampitaha ny tenanao amin'ny fomba ratsy amin'ny lahatsoratry ny hafa ianao.
Zava-dehibe ny hitadidiana fa olona maro no mitandrina tsara momba izay apetrany ao amin'ny mombamomba ny media sosialy.
Tsy te hizara ny lafiny tsara indrindra amin'ny fiainany fotsiny izy ireo.
Ilay selfie toa tsy misy ezaka navoakan'ny olona iray - izay mety hahatonga ny hafa hahatsapa ho ratsy tarehy sy tsy mahavita azy - dia mety ho iray amin'ireo 100 teo ho eo azony.
Ary avy eo dia namboarina tamina nomerika tamin'ny sivana isan-karazany mandra-pahatongan'ny fahagagana tanteraka.
Ny sary tena mahafatifaty an'ny sakaizanao izay faly, matory tsy mandry, ary afa-po tanteraka amin'ny zaza izay mahatonga anao hahatsapa ho toy ny ray aman-dreny mahatsiravina?
Ie, ireo no tsara indrindra amin'ny tsara indrindra: angamba an'arivony vitsivitsy alaina rehefa miantsoantso, mamoaka, ary mampifoha ny fianakaviana mandritra ny andro maromaro ny fianakaviana.
Olona maro izay mandehandeha amin'ny Instagram hahazoana aingam-panahy no manadino ny ezaka be natao mba hahatonga ireo sary ireo ho tonga lafatra.
Ankoatr'izay, amin'ny ankapobeny tsy mieritreritra ny fotoana sy ny loharano rehetra miditra amin'ny tetikasa samihafa izy ireo.
Izany dia mety hiteraka fahatsapana ny tsy fahampiana voalaza etsy ambony - fa ny fahaizan'izy ireo manokana, ny fikolokarinan'izy ireo momba ny fandrahoan-tsakafo, ny fampihetseham-batana, sns., Dia tsy hiteraka zavatra tsara toa ny nataon'ny olona hafa.
Hodinihin'izy ireo ny ezaka ataon'izy ireo na hiala ny fialam-boly tiany izy ireo satria raha ny tena izy, inona no antony raha ny hafa rehetra dia tsara lavitra noho izy ireo?
Ajanony fijanonana. Izao dia izao.
Raha io no noeritreretinao rehetra dia miverena miverina kely ary tadidio fa kintana mahavariana ianao, manan-talenta, ary mamirapiratra ianao.
Tsy mety diso ianao na 'tsy ampy tsara' satria iray ihany ianao.
Raha izany dia tsy afaka ampitahaina amin'ny olon-kafa ianao: mampatahotra sy tonga lafatra ianao noho ny hoe iza na manao ahoana ianao izao.
Atsofohy ny telefaoninao ary mandehana mitsangantsangana, esory ny lohanao, ary aza hadino izay ataon'ny olon-kafa, anaovany, mieritreritra, na miteny azy.
Mankalazà kely fotsiny anao, okay? Okay.
2. Mety hahatsapa ho tsy dia manirery sy ketraka ianao.
Fianarana iray navoaka tao amin'ny Journal of Social and Clinical Psychology nampiseho ny rohy misy eo amin'ny fampiasana media sosialy sy ny fanirery ary ny fahaketrahana.
Mety hahatsapa ianao fa tsy mahalala ny antsipiriany rehetra momba ny zava-mitranga amin'ny fiainan'ny hafa, fa amin'ny farany, tena mila mahafantatra an'izany rehetra izany ve ianao?
Betsaka ny olona mijanona amin'ny media sosialy noho ny FOMO: F sofina NA f M mamoaka NA mivoaka.
Manahy izy ireo fa raha tsy voatazona ao anaty loop izy ireo dia hiafara amin'ny halaviran'ny fiaraha-monina misy azy ireo, tsy asaina hiasa, sns.
Kivy ny olona sasany raha mahita ny sarin'ny fivoriambe izay tsy nanasana azy ireo.
Mahatsiaro malahelo sy nolavina izy ireo satria nilaozana, na ny hafa nahatsapa fa tsy 'ampy tsara' fotsiny izy ireo hanasa.
Ankehitriny, ny ankamaroan'izany dia misy ifandraisany amin'ny zavatra tsy ampoizina.
Tsy manasa antsika isaky ny asa ataon'ny olona tsirairay ao amin'ny faribolana sosialy misy antsika matetika.
Tsy hoe satria mpinamana amin'ny olona iray ao amin'ny Facebook isika dia tsy midika fa adidiny ny manasa antsika hanambady.
Ny olona sasany koa dia ketraka tokoa rehefa ireo ao amin'ny vondrona fiarahamonin'izy ireo dia mizara traikefa amin'ny fiainana izay tsy ananany, na tsy azony.
Ohatra, ny vehivavy sahirana amin'ny fitondrana vohoka dia mety ho ketraka noho ny tsy fahafahany manatrika vondrona renin-tany amin'ireo izay sakaizany akaiky indrindra.
Tsy vitan'ny hoe sahirana amin'ny dia mahavokatra izy fa mahatsapa ho tsy azon'ireo izay noheveriny ho manana fatorana matanjaka.
Ny zava-misy, ny olona dia manova zavatra betsaka rehefa mandeha ny fotoana, ary ny fisakaizana dia mihena arakaraka ny zavatra niainantsika teo amin'ny fiainana.
Raha tsapanao fa voahilika tsy ho eo amin'ny sehatra ara-tsosialy ianao dia manandrama miditra amin'ny faribolana vaovao.
Misy vondrona Meetup an-taonina isaky ny toerana rehetra azo eritreretina, manomboka amin'ny sakafom-boaloboka ka hatrany am-pandrafetana, LARPing, fanamboarana divay ary maro hafa.
Andramo izy ireo, ary mety ho hitanao fa manana fahafinaretana sy fahafaham-po manokana bebe kokoa noho ny taloha ianao rehefa nandany ora maro nanodinana ny fahana IG.
3. Manafaka ny tenanao amin'ny resaka fankahalana mety hanimba ianao.
Ny lafiny iray maharatsy indrindra ny media sosialy dia ny kabary fankahalana izay mihamitombo hatrany izay mihahaka eny rehetra eny.
Betsaka ny olona - indrindra ireo manana kaonty media sosialy tsy fantatra anarana - no mahita fa mety hiteraka zavatra mahatsiravina amin'ny olona an-tserasera izay mety tsy hiteny amin'ny endrik'izy ireo mihitsy.
Izany dia mety miainga amin'ny fanesoana olona noho ny safidiny manokana, hatramin'ny fandrahonana azy ireo amin'ny herisetra.
Betsaka ny olona sahy milaza ny heviny izay mivaona amin'ny fitantarana tsy maintsy atao ankehitriny ' doxxed ” : ampahafantarina ampahibemaso ny mombamomba azy ireo, miaraka amin'ny antso valifaty mba hifandraisan'ny sasany amin'ny toeram-pandraharahana na sekoly, sns. '' mba hanafoanana azy ireo.
Amin'ny ankapobeny, ny fananana hevitra tsy mitovy hevitra amin'ny Internet dia mety hametraka ny asanao manontolo, eny fa na dia ny fiainanao aza.
Sady mahakivy no mahakivy ny fahatsapana fa tsy afaka maneho malalaka ny zavatra inoanao ianao raha tsy matahotra ny vokadratsy mafy.
Raha izany, tsy dia lavitra ny mahita ny fomba mety hananan'ny olona iray manatri-maso fankahalana sy vitriol an-tserasera toy izany amin'ny fanahiana be loatra amin'ny mety hahatongavany amin'ny farany.
Mbola manimba kokoa aza ny fahitan'ny olona saro-pady ny fankahalana be dia be, ary mahatsapa fa izao tontolo izao dia cesspit fotsiny.
Araka ny azonao an-tsaina dia mety hampatahotra manokana ny tanora sy ny tanora izany.
Tsy vitan'ny hoe miatrika ny fihetsem-po mampihetsi-po azy ireo fotsiny izy ireo, fa rehefa miatrika ranomasina habibiana sy fanararaotana an-tserasera, dia mety hahatsapa izy ireo fa mampijaly loatra ny fisiana eto.
Diniho ny valiny < a> , izay nifantoka tamin'ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fahasalaman'ny sain'ny tanora:
'Ny fampiasana ny tranonkala tambajotra sosialy isan'andro (SNS) mihoatra ny 2 ora dia mifandray tsy miankina amin'ny tsy fahaleovan-tena momba ny fahasalamana ara-tsaina, sy ny traikefa amin'ny fahaketrahana ara-psikolojika avo lenta sy famonoan-tena.
Sarotra ho an'ny olon-dehibe ny mivezivezy amin'ny ranomasin'ny kabary fankahalana, habibiana ary fampijaliana amin'ny Internet, indrindra raha saro-pady izy ireo, toy ny empaths…
… Alaivo sary an-tsaina hoe manao ahoana izany ho an'ny tanora iray izay tsy manana hevitra velively momba ny fomba fiasan'izao tontolo izao na ny fomba fiasa marina hiatrehana izay hitany.
Ny media sosialy dia mety hampijaly izaitsizy tokoa, kanefa antenaina ny olona hiray feo sy hahafantatra ny zava-drehetra mitranga amin'ny fiainan'ny olon-kafa, ary koa ny vaovaon'izao tontolo izao sy ny sisa.
Ahoana no mahasalama izany?
4. Ho tsapanao fa tsy dia mavesatra loatra sy mahazo hery bebe kokoa ianao.
Tombanana fa ny olona antonony dia miharihary amin'ny vaovao misimisy kokoa ao anatin'ny iray andro androany noho ny olona iray tamin'ny vanim-potoana Victoria dia efa henony tao anatin'ny herintaona.
Ny fahalalana ny zava-mahatsiravina rehetra mitranga manerantany, isan'ora, isan'andro, dia be loatra.
Mahatonga ity tontolo ity ho toy ny toerana mahatsiravina, ary mahatonga antsika hahatsapa ho tsy manan-kery hanao na inona na inona hanampy.
Inona moa no tena azontsika atao manoloana ny fanaintainana sy ny famotehana?
Mazava ho azy fa zava-dehibe ny fanentanana mba hahafahantsika rehetra mifanohana amin'ny fananganana tontolo tsaratsara kokoa, saingy sarotra ny manamboatra izay ahafahana manao zavatra rehefa mandry eo amin'ny tany ianao satria mahatsiravina daholo ny zava-drehetra.
Raha manolo-tena amin'ny fanovana tsara ianao, nefa mahatsiaro ho tototry ny ratsy tarehy rehetra, tadidio ilay andian-teny hoe 'mieritrereta manerantany, miasà eo an-toerana.'
Mialà amin'ny fampahalalana be loatra momba ny crud mahatsiravina rehetra izay mandeha an-jatony kilaometatra miala anao, ary mifantoha amin'ny vondron'olona misy anao.
Aiza ireo teboka sarotra?
Inona avy ireo tanjakao?
Ahoana no azonao anampiana?
Fehezo ireo olana sy tetikasa eo an-toerana izay azo ampiasaina amin'ny fomba tsara ny fampidiranao sy ny herinao.
Raha manao izany ianao, dia ho hitanao ny fanovana tena izy, ary hisy fiatraikany tsara ho an'ireo ao amin'ny faribolana misy anao.
Hihalehibe ny vokan'ny rioka, satria izay rehetra mahatsapa ho tsara sy mahazo hery bebe kokoa manodidina anao dia hanampy amin'ny hery sy fanampiana ny hafa indray.
ahoana no hahalalana raha mihoatra ny taloha izy
Ary izany no mahatonga ny ezaka kely miteraka fiovana lehibe, maharitra sy maharitra.
5. Tsy hitsara mafy ny olona amin'ny zavatra apetrany ianao.
Mahagaga fa mora ny mitsara olona noho ny zavatra zarainy amin'ny media sosialy.
Hevitra, sary, sombim-baovao… na ny fampiasan'izy ireo (na fampiasàna diso ny tenifototra) - samy manana ny mety hahatonga antsika hieritreritra ratsy momba an'io olona io izy ireo.
Azontsika atao haingana ny mamela ny lahatsoratry ny hafa hitaona ny fomba fisainantsika sy fahatsapantsika azy ireo.
Ary mahamenatra izany raha mety hitia olona hafa isika ary hankafizinay ny fiarahan'izy ireo.
Ny antony nanehoan'izy ireo ny fanohanany antony na hetsika politika tsy ekenao dia tsy mahatonga azy ireo ho olona ratsy.
Ary tsy midika izany fa tsy afaka mifandray tsara amin'izy ireo intsony ianao amin'ny tontolo tena izy.
Ny fialana amin'ny haino aman-jery sosialy dia midika fa tsy manana fotoana intsony ianao hananganana ireo fomba fijery ratsy ananan'ny namana, olona ao amin'ny fianakaviana, na mpiara-miasa aminao ireo.
Ary izany dia afaka manatsara ny fifandraisanao amin'izy ireo mivantana.
6. Mety hiala ny fanandramana manapoizina ny fiainanao ny olona misy poizina.
Talohan'ny nialohan'ny media sosialy dia nifandray tamin'ny namana sy ny fianakaviana tamin'ny alàlan'ny mailaka, SMS, ary antso an-tariby ny olona.
Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa ny sehatra an-tserasera mba hifandraisana amin'ny hafa amin'ny besinimaro fa tsy amin'ny tsirairay.
Rehefa miala amin'ny haino aman-jery sosialy ianao dia miala amin'ny loop matetika.
Raha miala amin'ireo sehatra ireo ianao, dia tsy azo inoana fa ny ankamaroan'ny olona ifandraisanao isan'andro dia hiala an-tsakany sy andavany mba hampahafantatra anao ny zava-mitranga rehetra.
Rehefa dinihina tokoa, mora ny mamoaka lahatsoratra ary mamaly ny fanehoan-kevitra, satria izy rehetra dia ao amin'ny toerana iray ary azo iatrehana indray mandeha.
Mety ho tombony lehibe amin'ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny.
Raha manandrana manalavitra ny tenanao amin'ireo olona misy poizina ianao, ny fialan-tsasatra amin'ny media sosialy dia mety hanafaka ny tenanao amin'izy ireo mandritra ny fotoana fohy.
Rehefa dinihina tokoa, ny fandaniana fotoana fanampiny hitazonana anao hirotsaka amin'ny tantaran'izy ireo dia mety ho tsy dia mety loatra ho azy ireo, ka ho mora kokoa ny mamela anao irery.
Izany dia mandaitra indrindra amin'ireo mpampihomehy, satria hanaraka lasibatra mora kokoa hahazoana ny fifantohany sy ny fiankohofana izy ireo!
Aza manambara amin'izy ireo fotsiny fa miala ianao, satria na izy ireo handray azy manokana, na mihevitra azy ho fanamby hitazomana anao / hifandray amin'ireo olan'izy ireo manokana.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny media sosialy, rehefa vonona ny hanao izany ianao
Vonona ny hiala amin'ny media sosialy ve ianao?
Araka ny efa hitanao teto, dia misy antony marim-pototra be dia be hampiatoana azy (na farafaharatsiny maka fotoana fohy).
Atombohy amin'ny fotoana itadiavanao ny tenanao hahalalanao ny fotoana laninao amin'ny media sosialy amin'ny andro antonony. Avy eo mametraha timer mba hamerana ny fampiasanao.
Ahenao io fotoana io isan'andro, na isan'andro vitsivitsy - izay mety aminao indrindra.
Tsy isalasalana fa ho hitanao fa manana fotoana kely iaraha-miasa ianao, ankehitriny satria tsy mandroso tsy miato.
Ity fotoana ity dia ho anao mameno zavatra mahafaly anao.
Raiso ilay tetikasa famoronana izay natokanao tamin'ny taona lasa.
brock lesnar vola any amin'ny banky
Mandehana mandeha lavitra na mitaingina bisikileta.
Misy zavatra an'arivony azonao atao izay hiasa amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-pihetseham-po.
Rehefa vonona ianao dia aza misalasala manao fanambarana amin'ny tranonkalanao mba hampahafantaran'ny olona fa miato ianao.
Omeo fomba hafa hifandraisana amin'izy ireo toa ny adiresy mailaka na nomeraon-telefaonanao izy ireo ary jereo izay hitranga.
Ireo olona tena miahy anao dia hanao izay hahatonga azy ireo hifandray aminao.
Raha ny an'ny hafa kosa, ity dia fotoana mety indrindra hanapahana ny tambajotran-tseraseranao hatramin'ny zava-dehibe, sa tsy izany?
Ho fanamarihana farany, tadidio fa tsy mila miala tanteraka ianao raha mahatsapa tsy mahazo aina manao izany, ary afaka miverina foana ianao raha mahatsapa fa mila na maniry izany.
Ataovy amin'ny fomba manokana anao izany, raha toa ka rahoviana ianao no manao izany.
Ahoana no ahafahan'ny media sosialy manimba ny fifandraisana (+ ny fomba hanakanana azy io tsy hanimba anao)
Ireo zavatra manan-danja 6 azonao atao hahitana fiadanam-po anaty
ny fomba fanamboarana fifandraisana manosika sy hisintona
ny fomba hahazoana fahatsapana ho an'ny olona iray
iza no enzo amore nanambady
te ho irery ve ianao?
matahotra ve ny bandy rehefa tena tia tovovavy